Khelkudsansar.com | श्रीलंकामा एसीसीको हहेडक्वाटर स्थापना,एसीसी ‘ब्यूँतिदा’ नेपाललाई के फाइदा ?
Blog and Interview
श्रीलंकामा एसीसीको हहेडक्वाटर स्थापना,एसीसी ‘ब्यूँतिदा’ नेपाललाई के फाइदा ?
Posted on: August 26, 2016 | views: 336
काठमाडौं । एसियन क्रिकेट काउन्सिल (एसीसी)ले हालै श्रीलंकामा हेडक्वाटर स्थापनाको घोषणा गर्‍यो । र, यसलाई एसीसी फेरि ‘ब्यूँतिएको’ मानिएको छ ।
कसरी स्थापना भयो एसीसी ?
भारत र पाकिस्तान एकअर्काको देशमा आउन नसक्ने भएपछि दुबईको सारजाहमा खेल्न थाले । त्यहीबेलादेखि नै क्रिकेटको टेलिभिजन लाइभ हुन थाल्यो । पछि श्रीलंकालाई पनि थपेर एसिया कप गर्ने उद्देश्यसहित एसीसी स्थापना भयो ।
१९८३ मा स्थापना भएको एसीसीमा हाल चार टेष्ट नेशनसहित २५ देश पूर्ण सदस्य छन् । र, यसको अध्यक्षता टेष्ट देशले हरेक २ वर्षमा पालैपालो गर्ने सहमति भएको छ ।
एसीसीको मुख्य आयश्रोत एसिया कप हो । तर, पछिल्लो पटक एन श्रीनिवासन आइसीसीको अध्यक्ष भएपछि उनले एसीसीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरे । उनले एसीसीसहितका क्षेत्रीय निकायहरुले गर्ने सबै काम आईसीसीले नै गर्ने योजना अघि सारे ।
जसको मुख्य उद्देश्यको क्रिकेटको धेरै फण्ड ‘बिग थ्री’ भारत, अष्ट्रेलिया र इंग्ल्याण्डले पाओस् भन्ने देखिन्छ । र, एसीसीको क्वालालम्पुरमा रहेको कार्यालय बन्द भयो र, आइसीसी अन्तरगत रहने गरी सिंगापुरमा कार्यालय खोलियो । सिंगापुरमा कर कम तिर्नु पर्ने भएकाले आईसीसीले त्यहाँ कार्यालय खोलेको थियो । र, बन्दुला बर्नापुरालाई डेभलोपमेन्ट म्यानेजर बनाएर यो सिजन हेर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
तर, एसीसी रिजनका देशहरुले एसीसीको सक्रियता आवश्यकता महसुस गरे । लामो समय अनौपचारिक छलफलपछि उनीहरुले हालै मात्र हेडक्वाटर स्थापना गरे । कार्यालय सञ्चालनका लागि १० वर्षसम्म श्रीलंका क्रिकेट र सरकारले खर्च व्यहोर्नेछ ।
पूर्ण सदस्यताको मान्यता
कोलम्बोमा बसेको एसीसीको बैठकमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निर्वाचित कमिटीका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल सहभागी भएका थिए ।
आईसीसीले क्यानलाई निलम्बन गरेको छ । तर, एसीसीले भने उसले केही फरक नपर्ने बताएको प्याकुरलले दाबी गरे । ‘आईसीसीले आफ्नो कारणले निलम्बन गर्‍यो होला तर, एसीसीले त्यसलाई नै मान्नुपर्छ भन्ने छैन भनेर अध्यक्षले भन्नु भएको छ’ बैठकमा सहभागी भएर फर्किएका प्याकुरेलले भने । आफूहरुले नेपाल क्रिकेट संघको विवाद र क्यान निलम्बनबारे आफ्नो धारणा राख्दै निलम्बन हटाउन आइसीसीलाई दबाव दिन समेत माग गरेको उनले बताए ।
नेपाललाई के फाइदा ?
पछिल्लो समय नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी) ले निलम्बन गरेको छ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीले अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता त खेल्न पाएको छ । तर, क्रिकेटको विकासका क्षेत्रमा कुनै काम हुन सकेको छैन । न त घरेलु प्रतियोगिताहरु नै भएको छ । एसीसी नहुँदा नेपालले खेल्ने अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु पनि घटेको थियो । तर, एसीसी फेरि सक्रिय भएपछि नेपाली क्रिकेटले पनि केही आश गरेको देखिएको छ । अहिले आईसीसीले डेभलोपमेन्ट र एक्जुकेटिभ बडी बनाएको छ । र, यो वर्षको अन्त्यसम्ममा आफ्नो खेल तालिकाहरु सार्वजनिक गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
बैठकमा सहभागीहरुका अनुसार एसीसीले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताहरुमा नेपालको सहभागिता रहनेछ । साथै प्रशिक्षण, अम्पायर तालिमका साथै क्रिकेट विकासका क्षेत्रमा एसीसीले आफ्ना सदस्य देशहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ । यद्यपी अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न खाका आइसकेको छैन । नेपाल क्रिकेट संघ स्रोतका अनुसार २०१३/१४ तिर नेपालले एसीसीबाट झण्डै २ करोड सहयोग पाउने गरेको थियो । यो रकम महिला क्रिकेट, यू-१९ लगायतका नाममा आउँथ्यो ।
निर्वाचित क्यानका महासचिव प्याकुरेल भन्छन्, ‘एसीसीको सक्रियताले नेपाललाई फाइदा नै गर्छ ।’ आइसीसीले भने झण्डै ८ करोड दिँदै आएको थियो । जुन, लामो समयदेखि रोकिएको छ ।
तत्काल नेपालमा प्रतियोगिता आउँदैन
एसीसीको सक्रियतासँगै यो क्षेत्रमा प्रतियोगिताहरु बढ्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । र, यो क्षेेत्रमा चार टेष्ट नेशनबाहेकका क्रिकेट कन्ट्रीमा नेपालको नाम अगाडि आउँछ । तर, आइसीसीले निलम्बन गरेकाले नेपालमै तत्काल प्रतियोगिता भइहाल्ने अपक्षा गर्न गाह्रोछ । एसीसीले बनाएको डेभलोपमेन्ट र एक्जुकेटिभ कमिटीमा नेपालको सहभागिता छैन । नेपालले यससअघि नै एसीसीको डेभलोपमेन्ट कमिटीको सदस्य भएर काम गरिसकेको थियो । तर, अहिले आइसीसीको निलम्बनमा भएकाले सदस्य देशहरुले असहज महसुस गरेको बताइएको छ ।
टी-२० मा धोनीको पहिलो अर्धशतक
तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा अष्ट्रेलिया विजयी
१८ सदस्यीय नेपाली महिला टिम घोषणा, को-को परे टिममा ?
(+977) 01- 552174, 551234
© 2016, Khelkudsansar.com. All Rights Reserved